U sharax Bitcoin sida aniga oo shan jir ah | Exonumia
Haddii aadan wali garan karahayn waxa uu yahay bitcoin...
Aynu si fiican u eegno sida ay wax u dhaceen:
Ku laabo tufaaxa!
In yar ayaan fududeeyay
# U sharax Bitcoin sida aniga oo shan jir ah
Waxaa qoray Nik Custodio 2013/12/12open in new window
# Haddii aadan wali garan karahayn waxa uu yahay bitcoin...
Waxaan ku fadhinaa kursi yaala beerta. Waa maalin weyn.
Waxaan wataa hal tufaax ah. Waan aan ku siiyey.
Hadda waxaad haysataa hal tufaax, aniguna eber baan haystaa.
Taasi waxay ahayd mid fudud, Miyaney sidas ahayn?
# Aynu si fiican u eegno sida ay wax u dhaceen:
Tufaaxaygi physical ahaan wxaa ladhigay adiga gacantaada.
Waad ogtahay waxa dhacay. waan joogay halkaas adna waad joogtay. Waad taabatay.
Uma baahnin qof saddexaad oo halkaas naga caawiya wareejinta. Uma baahnayn inaan so jiidano Adeer Tommy (oo ah garsoore caan ah) si uu noogu fadhiisto kursiga keydka oo aan u xaqiijiyo in tufaaxu uu iga imid aniga.
Tufaaxa adigaa leh! Kuma siin karo tufaax kale sababtoo ah ii may hadhin waxkale oo tufaax eh . Mar dambe ma xakameyn karo. waxa aan uga tagay Tufaaxa Nolosheydii gebi ahaanba. Waxaad si buuxda u maamusho tufaaxaas hadda. Waxaad siin kartaa saaxiibkaa haddii aad rabto, ka dibna saaxiibkaa ayaa siin kara saaxiibkiis. Iyo wixi la mida.
Markaa taasi waa sida uu u eg yahay is-beddelka qof ahaaneed. Waxaan filayaa inay runtii isku mid tahay, waxa aan ku siin rabay muus, buug, ama aan ku idhaahdo rubuc, ama biil dollar ah….
Laakiin waxa aan ka hormaraa naftayda.
# Ku laabo tufaaxa!
Hadda waxaad tidhaahdaa, waxaan haystaa hal tufaax oo dhijitaal ah. Halkan, waxaan ku siin doonaa tufaaxkayga dhijitaalka ah.
Ah! Hadda arrinku waxa uu yeelanayaa xiiso.
Sideed ku ogaanaysaa in tufaaxa dhijitaalka ah uu yahay kii aan hore u haysan jirey,hadda waxa uu yahay kaaga, oo adiga uun baaba leh? Ka fakar tan hal ilbidhiqsi.
Arrinku wuu adkaaday maaha? Sideed ku ogaatay in aanan tufaaxaas u dirin Adeer Tommy sida lifaaq email ahaan marka hore? Mise saaxiibkaa Joe? Mise saaxiibkay Lisa sidoo kale?
Waxaa laga yaabaa in aan kombuyuutarkayga ku sameeyay dhowr koobi oo ah tufaaxaas dhijitaalka ah. Waxaa laga yaabaa in aan soo dhigay internetka oo hal milyan oo qof ay dejisteen.
Sida aad aragto, isbeddelka dhijitaalka ah waxa uusababay wa xoogaa dhibaato ah. Dirista tufaaxa dhijitaalka ah uma eeka dirista tufaaxa caadiga ah.
Qaar ka mid ah saynisyahannada kombuyuutarrada maskaxda leh ayaa dhab ahaantii magac u bixiyey dhibaatadan: waxaa loo yaqaannaa dhibaatada laba-qaarashka. Laakiin ha ka welwelin. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad ogaato ayaa ah, inay ku jahwareereen iyagu in muddo ah oo aanay welina xalin.
Ilaa iyo hadda.
Laakin aan isku dayno inaan ka fikirno xalkayaga.
# Buugaagta Macallinka
Waxaa laga yaabaa in tufaaxyadan dhijitaalka ah ay u baahan yihiin in laga raad-raaco buugga macallinka. Asal ahaan waa buug aad la socoto dhammaan wax kala iibsiga - iyo buuga xisaabaadka.
Buuga- macallinka, maadaama uu yahay mid dhijitaal ah, waxa uu u baahan yahay in uu ku noolaado adduunkiisa gaarka ah oo uu yeesho qof masuul ka ah.
Waxaad dhahdaa, sida World of Warcraft. Blizzard, ragga abuuray ciyaarta khadka tooska ah, waxay leeyihiin "Buug dijital ah" dhammaan seefaha dabka naadirka ah ee ka jira nidaamkooda. Marka, qabow, qof iyaga oo kale ah ayaa la socon kara tufaaxyada dhijitaalka ah. Cajiib - waanu xalinay!
Waxaa jirta xoogaa dhibaato ah inkastoo:
Maxaa dhacaya haddii nin ka mid ah Blizzard uu ku kacco in uu abuuro wax badan? Wuxuu kaliya ku dari karaa dhowr tufaax oo dhijitaal ah Rasiidkiisa mar kasta oo uu doono!
Si sax ah uma eka markii aan kursiga ku jirnay maalin. Aniga iyo adiga uun bay ahayd markaa. Ku dhex mara Blizzard waxay la mid tahay inaad soo jiidato Adeer Tommy (qayb saddexaad) oo ka baxsan maxkamadda (miyaan sheegay inuu yahay garsoore caan ah?) Dhammaan macaamiladayada kursiga keydka. Sideen kuugu soo wareejin karaa tufaaxkayga dhijitaalka ah, sida, ma ogtahay - habka caadiga ah?
Ma jirtaa hab si dhow loogu celceliyo fadhigeena beerta, adiga-iyo-aniga, wax kala iibsiga si dhijitaal ah? Waxay u egtahay tani mid adag…
Maxaa dhacaya haddii aan siino buug-gacmeedkan - qof walba? Halkii buug-yaraha uu ku noolaan lahaa kombuyuutarka Blizzard, wuxuu ku noolaan doonaa kombayutarada qof walba. Dhammaan wax kala iibsigii waligood dhacay, laga bilaabo wakhti kasta, tufaaxa dhijitaalka ah ayaa lagu qori doonaa dhexdiisa.
Ma khiyaami kartid. Kuma soo diri karo tufaax dhijitaal ah oo aanan haysan, sababtoo ah markaa lama mid noqon doonto qof kasta oo nidaamka ku jira. Waxay noqon doontaa nidaam adag in laga gudbo. Gaar ahaan hadii ay tahay dhabtii mid aad uweyn.
Intaa waxaa dheer ma aha mid uu maamulo hal qof, sidaas darteed waxaan ogahay in uusan jirin qof kaliya oo go'aansan kara inuu naftiisa siiyo tufaax badan oo dhijitaal ah. Xeerarka nidaamka ayaa horeba loo qeexay bilowgii. Xeerka iyo xeerarkuna waa il furan. Waxay u jirtaa dadka caqliga leh inay wax ku biiriyaan, ilaaliyaan, sugaan, horumariyaan, oo ay hubiyaan.
Waxaad sidoo kale ka qaybqaadan kartaa shabakadan oo aad cusboonaysiin kartaa buug-yaraha oo aad hubisaa in dhammaan la hubiyay. Dhibka, waxaad heli kartaa sida 25 tufaax dhijitaal ah oo abaal-marin ahaan ah. Dhab ahaantii, taasi waa habka kaliya ee lagu abuuri karo tufaax badan oo dhijitaal ah nidaamka.
# In yar ayaan fududeeyay
... laakiin nidaamkaas aan sharaxay ayaa jira. Waxaa loo yaqaan nidaamka Bitcoin. Tufaaxa dhijitaalka ahina waa "bitcoins" ee nidaamka dhexdiisa. Waa Cajiib!! Haddaba, ma aragtay waxa dhacay? Muxuu awooda inuu suura geliyo buuga Macallinku?
Waa il furan xusuusnow? Tirada guud ee tufaaxa waxa lagu qeexay buug-yaraha dadweynaha bilowgii. Waan ogahay qaddarka saxda ah ee jira. Nidaamka dhexdiisa, waxaan ogahay inay xaddidan yihiin (naadirna yihiin).
Markii aan wax beddelo, waxaan hadda ogahay in tufaaxa dhijitaalka ah uu si shahaado ah uga tagay hantidayda oo uu hadda yahay adiga gebi ahaanba. Ma awoodin in aan taas ka sheego waxyaabaha dhijitaalka ah. Waxa cusboonaysiin doona oo la xaqiijin doona iyada oo la marayo buuga macallinka ee guud.
Sababtoo ah waa buug-gacmeed dadweyne, uma baahnin adeer Tommy (dhinac saddexaad) si aan u hubiyo inaanan khiyaanayn, ama aanan naftayda u samayn nuqullo dheeraad ah, ama soo diro tufaax laba jeer, ama saddex jeer...
Nidaamka dhexdiisa, beddelka tufaaxa dhijitaalka ah hadda waa sida beddelka mid jireed. Hadda waxay u fiican tahay inaan arko tufaax jireed oo ka tago gacantayda oo ku rid jeebkaada. Iyo sida kursiga beerta, wax-isweydaarsiga ayaa ku lug lahaa laba qof oo keliya. Adiga iyo aniga - uma baahnin adeer Tommy halkaas si aan u ansaxno
Si kale haddii loo dhigo, waxay u dhaqantaa sida shay jireed.
Laakiin ma ogtahay waxa fiican? Wali waa dijitaal. Waxaan hadda la macaamili karnaa 1,000 tufaax, ama 1 milyan oo tufaax ah, ama xitaa .0000001 tufaax. Waxaan ku soo diri karaa adigoo gujinaya badhanka, welina waxaan ku ridi karaa jeebka dhijitaalka ah haddii aan joogo Nicaragua oo aad ku jirto dhammaan jidka New York.
Waxaan xitaa ka dhigi karaa waxyaabo kale oo dhijitaal ah oo korka tufaaxa dhijitaalka ah! Waa digital ka dib-dhan. Waxaa laga yaabaa inaan ku soo lifaaqo xoogaa qoraal ah - qoraal dijital ah. Ama waxaa laga yaabaa inaan ku soo lifaaqo waxyaabo kale oo muhiim ah; sida qandaraas, ama shahaado saamiyada, ama kaarka aqoonsiga…
Markaa tani waa wax weyn! Sideen u daaweynaa ama u qiimeynaa "tufaaxa dhijitaalka ah"? Aad bay faa'iido u leeyihiin miyaysan ahayn?
Hagaag, dad badan ayaa hadda ku doodaya. Waxaa jira dood u dhaxaysa kan iyo dugsigaas dhaqaalaha. Siyaasiyiinta dhexdooda. Inta u dhaxaysa barnaamijyada. Ha dhegaysan dhamaantood. Dadka qaar waa caqli badan yihiin. Qaar baa si khaldan loo sheegay. Qaarkood waxay yiraahdaan nidaamku wax badan ayuu u qalmaa, qaar waxay yiraahdaan dhab ahaantii waa eber. Nin baa run ahaantii dhigay tiro adag: $1,300 tufaaxiiba. Qaar waxay yiraahdaan waa dahab dijital ah, qaarna waa lacag. Qaar kale waxay yiraahdaan waa sida tulipska oo kale. Dadka qaarkiis waxay yiraahdaan waxay bedeli doontaa adduunka, qaar waxay yiraahdaan waa wax la yaab leh.
Aniga fikradeyda ayaan ka qabaa.
Taasi waa sheeko waqti kale in kastoo. Laakiin walaal, hadda waxaad wax badan ka taqaanaa Bitcoin in ka badan inta ay yaqaanaan dadka kale.
← Ku soo dhawoow Bitcoin, cusbusho! Bitcoin waa sida →